Uluhlu lweeNtengiso zePropathi: » Amakhaya okuhlala » Studios » GB » London » IStudiyo yokuqesha kuMbindi weLondon, eLondon1
United Kingdom, London, Central London, Wc1r 4na
I-1,668 Pound £
Inombolo yelizwe:: Wc1r 4na
Iimbonakalo: Available 17th March, Furnished, Moments from holborn, Newly refurbished, Wooden floors, First floor, All bills included, EPC band - C
Indawo yokuhlala entsha ephuculiweyo ebekwe kumgangatho wokuqala kwaye ibekwe ngaphakathi kwentliziyo yeHolborn. Iifestile ezinkulu kunye nokukhanya kwendalo okuninzi kunye nokufakwa okutsha kunye nokhuni lomgangatho kuyo yonke indawo. Zonke iindleko ezibandakanyiweyo. Ifumaneka nge-17 kaMatshi. Ifenitshala.
Nxibelelana nentengiso I-0208128xxxx
, Wc1r 4na
&nbspCentral London in London, Wc2a 2at
&nbspCentral London in London, Wc1h 9eh
Schools near Wc1r 4na